EU Ewepụghị ngwaahịa ígwè Ahịa Roundup SITE MEPS - China Ningbo Ke Ming Machinery
EU Ewepụghị ngwaahịa ígwè Ahịa Roundup SITE MEPS
German ndabere ụkpụrụ bilie, na August / September, n'ihi na-agaghị emeli na ego nke ihe onwunwe dị site ma European na esenidụt emepụta. Dị ka ọhụrụ mbipụta MEPS European Steel Review, ọkọnọ anọgide nanị, karịsịa maka ntekwasa na ngwaahịa, na nnyefe ụzọ ugboro gaa afọ-ọgwụgwụ na karịrị. Service center ebuka na mbenata ngwa ngwa dị ka a ọnụ ọgụgụ nke ọgwụgwụ-ọrụ, bụ ndị ga-ejikari ebe kpọmkwem azụmahịa na na nkume igwe nri, na-azụ site na nkesa iji nweta ígwè ọzọ ngwa ngwa.
Italian ọrụ emmepe akọ ọkọnọ tightness. Otú ọ dị, ha n'akụkụ peeji-anọgide na-squeezed. N'ihi na oge, ndị ahịa na-ala azụ ịkwụ ụgwọ ọzọ. The nkesa oru nwere ukwuu ikike na a ọnụ ọgụgụ nke stockists ka na-ere nnọọ aggressively.
Na UK, ọtụtụ ndị warara na nkume igwe nri ngwaahịa ahịa merela agadi, n'ọnwa a, dị ka continental European emepụta weliri ndabere ụkpụrụ na dechapụ na-adịghị ike pound magburu onwe. Suppliers na-now na-ekwu okwu nke onye ọzọ na ịrị elu. Ọtụtụ ndị nkesa na-n'itinye na nkume igwe nri na-abawanye, otú n'akụkụ peeji na-anabata. Ebuka bụ ala n'ihi ọkọnọ shortfalls. Anyị chọpụta obere nnweta si azụ ahịa.
Onye Belgium azụ ahịa kwuru na push maka elu ahịa adịghị na-egosipụta ọ bụla yiri ibu ke ina, ọ bụ ezie na ọrụ ozi ahịa na-ezi uche dị mma. Mill iji akwụkwọ, n'ihi na ọtụtụ warara na nkume igwe nri ngwaahịa, jupụtara na December, ma ọ bụ ọbụna karịrị. Ibu na-nnọọ nta na e nwere ndị na-egbu oge na-ama ogologo nnyefe ụzọ ugboro. Distributors na-akọ na na elu igwe nri ahịa nwere ike ọ bụghị etinyere Nregharị ụkpụrụ ke N'ọnọdụ nile.
A aghọta enweghị nnweta dugara elu ndabere na ọnụ ọgụgụ na Spain. Service emmepe na-nchegbu na ndị ahịa ha ga na-ikpe na-anabata na nkume igwe nri ịrị elu. Ụfọdụ na-azụ ahịa na-atụ anya na na ọkọnọ mbipụta nwere ike ga-egbo site mbụ nkeji iri na ise 2017. bụghị dịghị ihe ọzọ, n'ihi na competitively-ọnụ bubata bụ ihe na-enye site na a ọnụ ọgụgụ nke atọ obodo isi mmalite, adịghị emetụta antidumping jikoro.
Post oge: Aug-13-2018